के हो विक्कीले प्रस्तुत गरेको ‘पेन्टोमाइम’,किन वि’वादमा परे सन्तोष पन्त ? – Nepal Online Khabar
भाद्र १४, २०७८ सोमबार 363
काठमाडौं : ‘हाँस्ने स्टाइल र विदेशीको हाँस्ने स्टाइलमा फरक छ । यो प्रयोग तिम्रो लागि गाह्रो पर्न सक्छ । हाम्रो समाजले यसलाई वुझ्दैनन्, मैले त वुझिनँ । फिलोसोपी त भयो । तर, तिम्रो प्रस्तुति हेरेर कोही हाँस्यो त ! यहाँ त कोही हाँसेन ।
हाम्रो आफ्नै स्टाइल छ । यसलाई फलो गर ।’कमेडी च्याम्पियनका निर्णयक सन्तोष पन्तको यो टिप्पणीले अहिले उनको ‘कला–चेत’माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ । कलाको आयम र वि’विधतालाई बुझ्न अनि स्वीकार्न नसकेका भन्दै उनीमाथि टिका–टिप्पणी गरिएको हो ।
विक्कीले फाइनलमा पुग्नका लागि जुन खालको प्रस्तुति दिए, त्यो आफैमा जो’खिमपूर्ण थियो । विक्की आफैले भनेका छन्–‘मलाई पेन्टोमाइम अभिनय गरेको कारण कुनै पनि प’श्चाताप छैन । कमेडी च्याम्पियनको सेटमा म जित्न भन्दा पनि केही नयाँ गर्न आएको हुँ ।
शुक्रबार बेलुकीसम्म म स्ट्यान्डअप गर्ने कि पेन्टोमाइम गर्ने भन्ने थियो । म टप ४ बाट बाहिरिए भने पनि मलाई कुनै प’श्चाताप हुने छैन । मलाई बाहिरिदा पनि केही फरक पर्दैन ।’विक्कीको यो भनाइले पनि उनी आफ्नो प्रस्तुतिमा पूर्ण रुपमा आत्मविश्वासी थिए भन्ने वुझ्न सकिन्छ ।
मनोज गजुरेलले विक्कीको यो प्रस्तुतिलाई समयले वुझाउने बताए । प्रदिप भट्टराइले विक्कीले जो’खिम मोलेपनि फरक प्रस्तुति गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । तर, विक्कीको प्रस्तुति आफूले पनि नवुझेको भन्दै निर्णायक सन्तोष पन्तले उनीमाथि खरो टिप्पणी गरेका थिए ।
Prevआज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाइँदै : यस्ताे छ धा’र्मिक महत्व !
Nextआजदेखि नेपालबाट मनसुन बाहिरिँदै !
मौसममा सुधार हुन अझै केही दिन लाग्ने !
पवनदीप राजन बने इन्डियन आइडल-१२ को बिजेता